Cabbirro Alexandrite - jiiday - Czochralski - koritaanka kristaan ​​- video
Tags Alexandrite, Czochralski, Senttetik
Alexandrite waa mid ka mid ah dhagaxyada ugu quruxda badan. Farqiga ugu weyn ee ka dhexeeya alexandrite iyo muraayadaha kale ayaa ku jira awoodda u gaarka ah si ay u beddesho midab ku xiran iftiinka iftiinka. Alexandrite wuxuu leeyahay buluug-cagaaran ama midab cagaaran-cagaaran marka nalalka iftiinka macdanta cad loo isticmaalo, laakin wuxuu jilicsan yahay ama casaan-cas cas oo iftiinka qorraxda ama shumaca. Tan waxaa loo yaqaan 'phenomenon effect of alexandrite, waxaana caadi ahaan loo isticmaalaa macdano kale oo awood u leh inay bedelaan midabka. Tusaale ahaan, qoryaha, kuwaas oo bedeli kara midabka, ayaa sidoo kale loo yaqaannaa qoryaha leh saameynta alexandrite.
Alexandrite waa noocyo kala duwan ee chrysoberyl macdanta. Saamaynta isbeddelka midabka ee aan caadiga ahayn waxaa sabab u ah joogitaanka hoomiyamyada chromium ee baaldiga keega. Waqtigan xaadirka ah, alexandrite dabiici ah ayaa loo aqoonsan yahay mid ka mid ah kuwa ugu quruxda badan iyo kuwa dhif ah. Dabcan, tani waxay u horseeday muuqaalka sicirada suuqyada, taas oo ka fog fog dhagaxa asalka ah markay ku fashilmeen inay ka tarjumaan saameynta isbeddelka weyn ee isbeddelka iyo iftiinka ciyaaraha gudaha alexandrite dabiiciga ah. Qalabka Corundum waa mid aad u baahsan.
Hannaanka Czochralski (jiiday)
Nidaamka barbardhacu waa habka koritaanka kobcinta ee loo isticmaalo kumbuyuutarrada teknoolajiyada (tusaale silicon, germanium iyo gallium arsenide), birta (tusaale ahaan palladium, platinum, lacag, dahab), cusbada iyo miraayada birta. Nidaamka waxaa loo magacaabay ka dib markii cilmi-baaris Polish ah Jan Czochralski, oo soo saaray habka 1915 halka baadhitaan lagu samaynayo heerarka dhuxusha ee biraha. Waxa uu sameeyay shilkan oo uu sameeyay shil baabuur, isaga oo baranaya qiyaasta dhuxusha ee biraha marka, halkii uu qalinka ku riixi lahaa qalinka, wuxuu sameeyay sidaas oo kale waxa uu ka sameysan yahay daas bir ah, wuxuuna soo jiitay fiilo nadiif ah, taas oo mar dambe caddaynaysa inuu yahay keli ah.
Arjiga ugu muhiimsan waxaa laga yaabaa inuu kobciyo burooyinka cylindrical ballaaran, ama boules, oo ah silicon keli ah oo loo isticmaalo warshadaha elektaroonigga ah si loo sameeyo qalab yar oo qalab ah sida wareegyada isku dhafan. Waxyaabaha kale ee semiconductors, sida gallium arsenide, ayaa sidoo kale lagu kori karaa habkan, inkastoo cufnaanta hoose ee kiiskan la heli karo iyada oo la isticmaalayo farsamooyinka Bridgman-Stockbarger.
Ka-saarisyada: Ka baxsan bilaashka ah. (kala-goynta muhiimka ah ee Alexandrite dabiiciga ah: Roogagga, dildilaaca, godadka, jaranjarada kala-guurka, quartz, biotite, fluorite)